FMUSER FU-P2 2-Way Spltter ee Multi-bay FM Broadcast Antenna
FMUSER 2-Way FM Qaybiyaha Korontada Anteenada Antenna oo leh 7/16 DIN
Qiimaha (USD): 325
Rarida (USD): 85
Wadarta (USD): 410
Wax badan: Marka lagu daro anteenada 8 bay FM dipole, 2 bays, 4 bays, iyo noocyada 6 bays ayaa diyaar ah, xor u noqo inaad nala soo xiriirto!
Ku saabsan FU-P2 Antenna Power Spltter
Waa maxay Qaybiyaha Awooda Anteenada?
Qaybiyaha tamarta anteenada (sidoo kale loo yaqaan qaybiyaha tamarta anteenada ama isku-darka tamarta anteenada), waa nooc ka mid ah qalabka idaacadaha ee loogu talagalay in lagu daro ama loo qaybiyo anteenooyinka baahinta idaacadaha ee qaybiyaha tamarta coaxial.
Waxa laga yaabaa inaad u baahato FMUSER FU-P2 anteeno awood qaybisa haddii aad ku jirto mid ka mid ah codsiyada soo socda
Hawl-wadeennada idaacadaha kuwaas oo u baahan xalal furaha raadiyaha oo dhammaystiran oo qiimo jaban ah
Quwadda Anteenada ee Raadiyaha
Guud ahaan, kala qaybiyeyaasha anteenooyinka waxaa loo qaybin karaa VHF iyo FM-ta anteenooyinka, iyo noocyada VHF-ga ayaa inta badan aad uga qaalisan noocyada FM-ka.
Idaacad FM ah, haddii aad u baahan tahay inaad kordhiso faa'iidada nidaamka anteenada raadiyaha FM-ka, qaybiyaha awoodda FM ayaa loo baahan yahay. Waxay u qaybin doontaa awoodda si siman laga bilaabo gudbiyaha ilaa dhammaan anteenooyinka raadiyaha ee ku xiran
Noocyada ugu badan ee la arko ee qaybiyeyaasha anteenada FM-ka ayaa asal ahaan ah 2-way, 4-way, 6-way, iyo 8-way, kuwaas oo loo adeegsan karo sida ay u kala horreeyaan, oo leh 2 bay, 4 bay, 6 bay, iyo 8 bay FM dipole anteeno. Injineerka raadiyaha, waa inuu ogaadaa gudbiyaha FM-ka iyo anteenada idaacada FM waa labada qaybood ee ugu muhiimsan qalabka baahinta idaacada FM, in kasta oo kuwani yihiin kuwa ugu cad cad baahinta raadiyaha maalinlaha ah, haddana, qalab kale oo muhiim u ah isgaarsiinta raadiyaha. Sida kala qaybisa tamarta anteenada ee anteenada FM-ta ee awooda sare leh waxaa laga yaabaa in aan la dareemin sida gudbiyeyaashu ama anteenooyinkuba sameeyaan, wali waxay faa'iido u leeyihiin arrimo badan oo ah hawlgalka idaacada guusha leh.
Tilmaamaha guud ee FU-P2
Hoos u dhigista hooseeya
VSWR heer sare ah (RL=>25dB)
Isticmaalka is-dhaafsiga sida awood qaybiye ama isku-darka
Lagu heli karo N-Lab ama 7/16 xiriiriyaha DIN @ gelinta
Habaynta ayaa diyaar u ah faahfaahintaada cabirka cabbiraadda.
Maxaa ka sii badan:
Fudud oo lagu rakibo Qaybiyeyaashan korantada waxay ku fiican yihiin quudinta anteenooyin badan si ay kuugu oggolaadaan inaad kordhiso aagga daboolka calaamadaha, waxay ku qalabaysan yihiin isku-xirayaasha. Waxaad u baahan doontaa fiilooyinka inter-bay si aad ugu xidhid qaybiyaha iyo dipoleska gaarka ah. Xadhkahani waa inay ahaadaan 50 ohms oo dhammaan dhererkoodu waa isku mid.
Xalka qiimaha jaban ee anteenada badan ee bay - Haddii aad dhisayso idaacad FM ah oo khabiir ah, waxaa laga yaabaa inaad kharash badan ku iibiso qalabka baahinta qaaliga ah, iyo kharashyo badan oo soo socda ee hawlgalka mustaqbalka, markaa maxaad u dooran weyday inaad noqoto miisaaniyad bilowga idaacadaada? Aynu isku dayno kala qaybiyaha anteenada laba-geesoodka ah oo dabooli kara baahidaada kharashyada hoos u dhacaya runtii,
Alaab-qeybiyeyaasha tamarta anteenada ugu fiican
FMUSER waa soo saaraha ugu jaban ee qalabka idaacada oo leh sahayda aduunka oo dhan. Waxaan naqshadeynaa oo aan gaarsiinaa qalabka raadiyaha laga soo bilaabo xirmooyin dhameystiran si aan u habeynno xalka. Ka sokow, marka laga reebo UHF/VHF/ gudbiyaasha baahinta, waxaan sidoo kale dhisnaa nidaamyada anteenada baahinta qiimaha jaban ee iibsadayaasha miisaaniyadda - laga bilaabo HF, VHF, UHF, ilaa yagis, dipole, log periodic, anteeno toosan, iwm. Dareen xor u ah inaad la xiriirto anaga haddii aad leedahay wax shuruudo naqshadeynta gaarka ah. Waxaan kuugu adeegnaa qalabka baahinta ee naqshad adag oo adag mar walba!
Xidhiidhada Iibka ee Multi-bay FM Dipole Antennas:
Fiiro gaar ah: Qiimaha bogga kuma jiraan dhoofinta; fadlan wax ka weydii qiimaha rarida ee dhabta ah ka hor inta aanad dalban.
Qiimaha iyada oo aan la rarin(USD)
50W iyo 1KW FM TX
1KW, 2KW, iyo 3KW FM TX
3KW iyo 5KW FM TX
3KW, 5KW, iyo 10KW FM TX
FAQ on Antenna Power Splitter
Qaybaha anteenada ma shaqeeyaan?
In kasta oo aanay inta badan ku filnayn arrintu, haddana way jirtaa. Waxaad isticmaali kartaa qaybiye si aad u quudiso qaybiye kale. Calaamaduhu waa la kala qaybsan karaa inta jeer ee aad u baahan tahay, laakiin qaybiyayaal kasta oo dadban ayaa ku daraya khasaare badan oo gelin ah, qaybo badan oo awood leh ayaa sababi kara isbeddel weyn
Isticmaalka coax splitter ma yareeyaa tayada?
Kala qaybisa fiilada waxay keeni doontaa hoos u dhac ku yimaada ishaarada, xitaa haddii dekedaha kale aan la isticmaalin. Hal shay oo aad samayn karto ayaa ah inaad ku darto koofiyada terminter-ka deked kasta oo aan la isticmaalin. Waa inay yareeyaan xaalufka. Ogsoonow in fiilooyinka kala jaban ee jaban ay dhab ahaantii yeelan doonaan qadar ka duwan khasaaraha calaamadaha deked kasta.
Intee in le'eg ayay calaamaduhu luminayaan qaybiyaha 4-way?
2-Way Passive Splitter ah ayaa aragti ahaan u kala qaybin doona awoodda wax gelinta kala badh, taas oo ah khasaaraha 3dB wax soo saar kasta (wax ku ool ah oo ku saabsan 3.5dB). Si la mid ah, 4-way Splitter waa 2-Way Splitters oo kaliya oo burbursan waxayna keeni doontaa khasaare 6dB ah deked kasta.
Immisa calaamad ayaa ku luntay kala qaybiye?
Qaybiye wuxuu yeelan doonaa qiyaastii 3.5 dB khasaare ah deked kasta. Qaybiyeyaasha signallada TV-ga oo leh wax ka badan laba dekedood oo wax soo saar leh ayaa caadi ahaan ka kooban qaybo badan oo laba-gees ah.
Qaybaha tamarta anteenada waxay muhiim u tahay sida gudbiyaha raadiyaha FM-ka iyo anteenada baahinta, markaa fadlan hay kuwa ugu fiican idaacadahaaga, haddii loo baahdo, noo soo sheeg baahiyahaaga wax ka beddelka mid kasta oo ka mid ah kuwan tamarta anteenada ah, waxaan had iyo jeer nahay. dhagaysi.
1 * 2 dariiqa korantada
Range Frequency 87-108MHz
Awoodda RF 1kw
Waxqabadka RF L29 dumar ah (7/16 DIN)
Wax soo saarka RF N dhedig
aragti 177 x 12 x 7cm (L x W x H)